@ActLenguas : Atsofok’i Genner Llanes Ortiz ho ao anatin’ny fanelezana ny fiteny Maya ny aterineto sy ny haikanto · Global Voices teny Malagasy
@ActLenguas : Atsofok'i Genner Llanes Ortiz ho ao anatin'ny fanelezana ny fiteny Maya ny aterineto sy ny haikanto
Nandika (fr) i Nelly Le Sagesse
Voadika ny 14 Aogositra 2019 3:03 GMT
Vakio amin'ny teny Français, русский, Esperanto , Español
Sary natolotr'i Genner Llanes Ortiz.
Amin'izao taona 2019 izao dia nanasa vahiny samihafa izahay mba hitantana ny kaonty Twitter @ActLenguas sy hizara ny traikefan-dry zareo amin'ny resaka famelomana indray sy fampiroboroboana ny tenindreniny. Ato anatn'ity lahatsoratra ity ianao dia hahafantatra misimisy kokoa momba an'i Genner Llanes Ortiz sy ireo lohahevitra horesahany mandritra ny herinandro ampiantranoany ny kaonty.
Rising Voices (RV) : Lazalazao anay ny momba anao…
Maya avy ao Yucatan aho ary antropology (mpahay momba ny olombelona). Niasa mandrakariva niaraka tamin'ireo vondrom-piarahamonina sy ireo fikambanana sivily. Fony aho mbola zaza, tsy nisy nandetika io fiteny io tao an-tsaiko, fa niverenako nianarana ilay izy tany anatin'ny habak'ireo fikambanana politika sy ireo fihetsiketsehana ara-kolontsaina. Tany am-piandohan'ity taonjato ity aho no nandao ny faritra nisy ahy, saingy ny foko sy ny fitiavako dia miverina hatrany any amin'ilay tany nilatsahan'ny tavoniko. Raha momba ny tambajotra sosialy indray, namorona bilaogy aho ary tao no natambatro ireo votoaty mifamatotra amin'ny kolontsaina sy ny fiteny maya. Niaraka tamin'ireo mpikatroka hafa dia nandray anjara koa aho tamin'ireo fanentanana tety anaty aterineto mba hametrahana ho eny amin'ny lohalaharana ireo vahoaka sy ny maya isam-batanolona. Vao haingana, nandrafitra lisitra iray ao amin'ny Spotify aho ahitàna ireo hira amin'ny fiteny maya sy lahatsary iray hafa ao amin'ny Youtbe. Amin'izao isika miresaka izao, mpampianatra ao amin'ny anjerimanontolo ao Leyde any Hollande aho.
RV : Ny toerana misy ny fiteninao ety anaty sy ivelan'ny aterineto amin'izao fotoana izao?
Hatrany afovoan'ny taonjato faha-20 ny fiteny maya dia fiteny iray tena nampiasaina hifandraisana isanandro tao amin'ny saikinosy Yucatan. Rehefa nandeha ny fotoana, vetivety dia nilaozan'ireo mpiteny azy izy. Na eo aza ny kabary ataon'ny governemanta, mbola misy hatrany ny fanavakavahana ireo olona miteny ny fiteny maya ary izany dia tsy mandrisika ny fampitàna ilay fiteny ho any amin'ny andian-taranaka aty aoriana. Ampiasaina any amin'ny sekoly ambaratonga fototra ny fiteny maya ary misy koa ireo boky, hira sy fitaovana tohana samihafa, saingy tsy mifamoivoy loatra izy ireny. Na ohatra aza ny fiteny maya ka hita be ety anaty aterineto tato anatin'ny taona vitsivitsy farany, mbola betsaka ny asa miandry.
RV : Lohahevitra momba ny inona no ho ampitainao amin'nyu alàlan'ny kaonty @NativeLangsTech ?
Ao anatin'ny fotoana andraisako anjara amin'ity fanentanana ity, eritreretiko ny hizara ireo fisaintsainana momba ny anjara asan'ny haikanto amin'ny famelomana indray ireo teny zanatany sy ireo teny hafa vitsy an'isa eto ambonin'ny tany, ary koa momba ireo singa manahirana mifanjevo izay mandray anjara amin'ny fisintahan'ireo mpiteny azy ireny sy ny vokatra tena ratsy aterany. Hozaraiko ihany koa ireo ohatra mahaliana momba ny vondrom-piarahamonin'ireo mpahay/mpandinika momba ny fiteny miasa ho an'ny fanombànana indray sy ny fampaharetana ny tenin-dry zareo ao Amerika Latina, sy any amin'ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao.
RV : Inona no tena antony manosika anao ho amin'ny fikatrohana an-tserasera ho an'ny fiteninao? Inona no fanantenanao sy nofinofinao ho an'ny fiteninao?
Rehefa nifanesy ny taona, toa hitako mibaribary, toy ireo namana hafa mpikatroka rahateo, fa tsy ho ela velona manoloana ny fanilikilihana ireo fiteny tsy tenenina intsony eny anivon'ny ankohonana. Nefa “ny fitenenana” ireny teny ireny dia midika ihany koa fa tsy maintsy ampiasaina eny imasom-bahoaka izy ireny, na any an-tsekoly izany na any anivon'ireo mpitantana sy ny fampahalalambaovao isankarazany. Talohan'ny vanim-potoanan'ny aterineto, ny fivezivezen'ny zavatra voasoratra tamin'ny fiteny zanatany (indizeny) dia niankina betsaka tamin'ireo fitaovana sy ny hoenti-manana, izay tsy betsaka tamin'ireo mpiteny azy no nanana azy ireny. Nanova izany tanteraka ny Tranonkala 2.0. Ny fampahafantarana ny daholobe momba ny fiteny zanatany dia mitaky ny hoe mila soratana izy ireny, hiraina, tanisaina, lalaovina, amporisihana, ary itondràna fanehoankevitra, sns…. Antenaiko fa ny fanovàna ireo fitaovana fifandraisana dia hanome fahitàna misimisy kokoa ho an'ny teniny, na ety anivon'ny aterineto izany, na amin'ny fiainana isanandro. Ny nofinofiko dia ny ho afaka handray anjara hahatanteraka izany.